Axmed Maxamed Xaaji Daahir
Allaha u naxariistee waxaa xalay ku geeriyoday magaalada Isiolo ee Kenya, wariyihii caanka aha Axmed Maxamed ‘Axmed Taajir’oo in muddo ah xanuunsanaa.
Allaha u naxariistee waxa xalay ku geeriyooday magaalada Isiolo ee dalka Kenya, Weriyihii caanka aha ee Idaacadda BBC-da Laanteeda Af-Soomaaliga Axmed Maxamed Xaaji Daahir (Axmed-Taajir) oo in muddo ah xanuunsanayey.
Axmed Taajir oo dad badan oo dhagaysan jiray aad ugu ugu xasuustaan codkiisii cajiibka ahaa ahaa wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayey Idaacadaha Af-Soomaaliga ee Kenya iyo Laanta Af-Soomaaliga ee BBC-da. Waxaanu ahaa Weriye dhagaysiga codkiisa dad badani jeclaayeen ama aad uga heli jireen.
Maxamed Cabdullaahi oo ah madaxii hore ee laanta Af-Soomaaliga ee BBC ayaa ka warramay taariikh-nololeedkii Axmed Maxamed. Waxaanu sheegay in Allaah ha u naxariistee uu Idaacadda dawladda Kenya uu ka shaqa-galay 1975-kii, halka uu Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ka hawl-galay 1985-kii. Waxa uu Maxamed Cabdillaahi sheegay in Axmed Taajir ahaa nin akhlaaq badan,
tixgelin badan, qunyar socod ah oo aad u dhawrsoon. “Axmed oo weligii qof xamanaya maan arag, waxa uu ahaa nin af-gaaban oo qunyar socod ah, Axmed ma ahayn dadka lagu arko meelaha fadhi-ku-dirirka ah, weligii lama arag isaga oo taagan meel sharaftiisa wax u dhimaysa ama aan wanaagsanayn, waxa uu ahaa nin gurigiisa iyo shaqadiisa u dhexeeya.
Waxa uu ahaa nin aan weligii shaqo lagu durin intii uu BBC-da nala joogay, intii iga horreysay ee Gabadha caddaanka ahi madaxda ka ahayd laanta Af-Soomaaliga ee BBC, intii iga dambaysay ee Yuusuf Garaad joogay weligii Axmed Shaqo laguma durin. Illaahay naxariistii Janno haka waraabiyo.”Madixii hore ee Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da Maxamed Cabdillaahi waxa uu tacsi u diray qoyskii, qaraabadii, Asxaabtii iyo Bahda Warbaahinta Soomaaliyeed ee uu ka baxay Weriye Axmed Maxamed Xaaji Daahir (Axmed-Taajir) oo uu xusay inuu ahaa dadka ugu dhaqanka, akhlaaqda, dabeecadda iyo anshaxa fiican ee Saxaafadda Soomaalida ku jiray.
Previous: Taariiqda Amiin Caamir
Next: Wariye Abwaan Cabdala Nuurdiin Axmed